This page isatranslated version of the page COVID-19 and the translation is 16% complete.
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၈ ရက်မှစ၍ ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၅ မတိုင်မီဖြစ်ပျက်နေသော ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ငွေကြေးပံ့ပိုးထားသောအော့ဖ်လိုင်း (လူပုဂ္ဂိုလ်) ဖြစ်ရပ်များ၊ ညီလာခံများနှင့်စုဝေးမှုများအားလုံးကိုနောက်ထပ်အသိပေးစာအထိဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက်ဒီစာမျက်နှာကိုဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်(စ်) ရောဂါ ၂၀၁၉(COVID-19) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ပထမဆုံးအစီရင်ခံခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကမတ်လ ၁၁ ရက်တွင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှကြေငြာခဲ့သည်။ ဝီကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသောအုပ်စုများသည်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာလျက်ရှိသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင်ကူးစက်ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကိုနှေးကွေးစေရန်ကူညီမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းသည်ဤစာမျက်နှာကိုကူးစက်ရောဂါအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတုန့်ပြန်မှုများကိုလူသိရှင်ကြားမျှဝေရန်၊ သက်ဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်းအားသတင်းပို့ခြင်း၊ သင်၏ Wikimedia အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ တွဲဖက်များနှင့်အခြားဖွဲ့စည်းထားသည့်အုပ်စုများသည်ဤအခြေအနေအပေါ်မည်သို့တုံ့ပြန်နေကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖြည့်စွက်ရန်ဖောင်ဒေးရှင်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။ မီဒီယာစုံစမ်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ press wikimedia.org ကိုဆက်သွယ်ပါ။
၁.၁ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များနှင့် အချက်အလက်
၁.၂ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ
၁.၃ ဝီကီမီဒီယာ ပရောဂျက်များ
၁.၄ Working and meeting remotely
၁.၅ Helpful steps to prevent the spread of the COVID-19 virus
၂ Efforts related to Wikimedia projects
၂.၁ Cross-wiki collaboration
၂.၄ ဝီကီမီဒီယာ ကွန်မွန်းစ်
၂.၇ အသုံးချ ဝီကီမီဒီယာ ဒေတာ
၃ Wikimedia Foundation messages
၄ Information from movement affiliates and organized groups
၅ Seeking assistance
၆ Frequently asked questions
၆.၁ What is being done about Wikimania?
၆.၂ Are there recommendations extending beyond grant recipients?
၆.၃ What about planned Wikimedia Foundation events?
၆.၄ What is happening with the Wikimedia Foundation's current programs and plans?
၆.၅ How will the Wikimedia Foundation working 20 hoursaweek work?
၆.၆ What is the Wikimedia Foundation currently doing to support the community?
၆.၇ What is the Wikimedia Foundation currently doing to support its staff and contractors?
၆.၈ How long will the Wikimedia Foundation offices remain closed?
၆.၉ How long will the Wikimedia Foundation's travel be suspended?
၂၀၂၀ မတ်လ ၁၈ ရက်တွင် ဝီကီမီဒီယာ လှုပ်ရှားမှုသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့်အောက်ပါ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၅ မတိုင်မီကျင်းပသောကွန်ဖရင့်များ အပါအဝင်ဝီကီမီဒီယာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသော အော့ဖ်လိုင်း (လူကိုယ်တိုင်) အများပြည်သူဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကို နောက်ထပ် အသိပေးခြင်းမတိုင်မီ ဖျက်သိမ်းရမည် သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းရမည်။ ၎င်းတွင် Wikimedia Summit 2020 နှင့် Wikimania 2020 တို့ပါဝင်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များနှင့် အချက်အလက်
အသုံးချ ဝီကီမီဒီယာ ဒေတာ
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=COVID-19/my&oldid=21436083"